तपाईंले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यो१० गल्ती, नत्र समयमै बिग्रन्छ दाँत!!! – News Nepali Dainik
तपाईंले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यो१० गल्ती, नत्र समयमै बिग्रन्छ दाँत!!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०६, २०७७ समय: ११:१७:३३
*)नियमित परीक्षण नगर्नु : नियमित रुपबाट परीक्षण दाँतको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । दाँतमा पीडा, सडन, सेन्सिटिभिटी हुनेबेलासम्म नकुर्नुस् । त्यसैले वर्षमा एकपटक डेन्टिस्टसंग परीक्षण गराउँनुपर्छ । यसबाट रोग निम्तनुअघि नै रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
**) समस्या तत्कालै भुल्नु : कुनै पनि समस्याबाट आराम मिल्नेबित्तिकै बिर्सने बानी खतरनाक साबित हुन्छ । फलोअपका लागि डाक्टरले बोलाएका छन् भने त्यसलाई फलो गर्नुस् । गिजाको शल्यक्रियाजस्तो स्थितिमा घाउ भरिन र पूरै सामान्य हुन समय लाग्छ, त्यसैले नियमित फलोअप गर्नुहोस् ।
***)आफैँ डाक्टर बन्नु : विना डाक्टरी सल्लाह कुनै पनि औषधि सेवन गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ । यसैले जब तपार्र्ईंलाई दाँत, मुख या शरीरको अन्य भागमा समस्या महसुस भएको छ भने डाक्टरकहाँ जानुस्, आफैंँ घरेलु उपचारमा नलाग्नुस् ।
****)आफूलाई भएका सबै समस्या नभन्नु : दाँतको उपचार गर्नुपूर्व पहिले कस्तो रोगमा कस्तो उपचार गर्नुभएको थियो भनेर सबै विवरण भन्नुस् । कुन औषधि कति लामो समयदेखि खाइरहनुभएको छ, कुन औषधिले एलर्जी भएको छ, सबै बताउनुस् । शरीरका अन्य भागको समस्या बताउँदा दाँतको उपचारमा पनि लाभकारी हुन सक्छ ।
*****) हतारहतार दाँत मोल्नु : प्रायजसो मानिसहरु दाँतको सफाईमा समय दिँन झन्झट मान्छन् । हतारहतार ब्रस गर्दा दाँतको इनामेल कमजोर हुन्छ । त्यसैले दाँतलाई स्वस्थ बनाउँन अलि समय लगाएर ब्रस गर्नुपर्छ भने दिनमा कम्तीमा दुईपटक दाँत माझ्नुपर्छ । नरम ब्रसले दाँतकोे बाहिर र भित्र दुवैतर्फ सफाई गर्नुपर्छ । मुखको हरेक कुनामा ब्रस पुग्नुपर्छ । ब्रसलाई तीन–चार महिनामा बदल्नुपर्छ ।
Last Updated on: January 19th, 2021 at 11:17 am